အဆုံးသတ်သွားရပြီ ဖြစ်တဲ့ Kia Sedona နေရာကို အသစ်ဝင်ရောက်လာမယ့် Kia Carnival ! – MyMedia Myanmar
အဆုံးသတ်သွားရပြီ ဖြစ်တဲ့ Kia Sedona နေရာကို အသစ်ဝင်ရောက်လာမယ့် Kia Carnival !
ကားလောကထဲမှာ Minivan ကား အမျိုးအစား လောကကတော့ ခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ကောင်းကောင်းဖန်တီး ထားနိုင်တဲ့ Kia Sedona လို ကားမျိုး ကလည်း ရှားပါးပါတယ်။ အဆိုပါ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ထုတ် Kia ကားကတော့ဘက်စုံသုံး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကားတစ်စီး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့ကာ 2021 အတွက်လည်း အထင်ကြီး လောက်စရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ 2020 မှာပဲ မျိုးဆက်သစ် Sedona ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ မှာပဲ အမေရိက ရဲ့ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာမှာပါ။ Kia ရဲ့ Midsize Platform ပေါ်မှာ အခြေခံ ထားတဲ့ Sedona အသစ် ဟာ ဆိုရင် တကယ်ကို ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ Van ကား တစ်စီး ဖြစ်ကာ အခုဆိုရင် ပိုပြီးတော့ တိုလာတဲ့ Overhang နဲ့ ပိုရှည်လာတဲ့ Hood တို့လို Features အသစ် တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းလာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ Sedona အနေနဲ့ မဟုတ်တော့ပဲ နာမည်အသစ် အနေနဲ့ ကားလောကထဲမှာ ဆက်လက် ရှင်သန် တော့မှာ ဖြစ်ကာ Official VIN Decoder အရ ဆိုရင်တော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ မော်ဒယ် ကစလို့ Sedona အစား Carnival လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ် တော့မှာပါ။
Sedona ရဲ့ Forum User ဖြစ်တဲ့ Van Man ကတော့ 2022 Carnival နဲ့ ပက်သက်တဲ့ Official VIN Decoder ကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ကာ NHTSA က နေတစ်ဆင့် ထုတ်ဖော်ခဲ့ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နာမည်အသစ် ထွက်ပေါ်လာတော့မယ် ဆိုတာဟာ တကယ်ကို သေချာသွားခဲ့ပါပြီ။ တရားဝင် အချက်အလက်တွေ အရဆိုရင် Hyundai America Technical ရဲ့ Vehicle Certification And Complaince Department ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Ric Willard က ပြောကြားထားရာမှာတော့ “49 CFR 565 နှင့် အညီ ၊ Hyundai Motor Group ၊ Hyundai-Kia America Technical Center, Inc. (“HATCI”) တို့ရဲ့ ကိုယ်စား လာမယ့် 2022 Model Year အတွက် 2022 MY Kia Carnival အဖြစ် V.I.N Decoding ကို တင်သွင်း ပါသည်” ဆိုပြီး ဖော်ပြထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါ Decoder ကို အသေးစိတ် ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ Trims နာမည်အသစ် တစ်ချို့ ဖြစ်တဲ့ LX ၊ EX ၊ SX နဲ့ SX Prestige တို့ကို လည်း တွေ့မြင်နိုင်သလို Wagon 4×2 Cls-E နဲ့ Cls-D တို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုလိုမျိုး နာမည် ပြောင်းလဲ လိုက်ရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ တစ်ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာ Product တစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ဆောင် နိုင်ဖို့ အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Carnival အသစ်ကတော့ လက်ရှိ မျိုးဆက်ကနေ အတော်လေး ကွဲပြားသွားတဲ့ အပိုင်းတွေကို မြင်ရမှာ ဖြစ်သလို အပြင်ပိုင်း ဒီဇိုင်းပိုင်း အသွင်အပြင် အရလည်း အပြောင်းအလဲတွေ များ လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အနက်ရောင် A နဲ့ B Pillar တွေ နဲ့ အတူ Tiger Nose Grille ကိုလည်း တပ်ဆင် ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာတော့ Dual Screen Display ကိုလည်း မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ Kia ရဲ့ 3.5 Liter GDi V6 Engine ကို တပ်ဆင် လာမယ် လို့ မျှော်လင့် ရတာ ဖြစ်ကာ စွမ်းဆောင်ရည် အနေနဲ့တော့ 290 hp နဲ့ 261 lb-ft Torque လောက် အထိကို ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Sedona ကနေ Carnival ကို နာမည် လေး ပြောင်းလိုက်တာ ဟာ သိပ်ပြီး မထူးဆန်း ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း အသစ် ထွက်လာမယ့် ကားတွေ အတွက် ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတာကြောင့် ဆက်လက် စောင့်ကြည့် ရတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အဆုံးသတ်သွားရပြီ ဖြစ်တဲ့ Kia Sedona နေရာကို အသစ်ဝင်ရောက်လာမယ့် Kia Carnival ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-13T16:00:30+06:30January 13th, 2021|MYCARS MYANMAR|